Filoha Rajoelina Andry: “Tsy maintsy ho vita ny RN 44…” | NewsMada
Filoha Rajoelina Andry: “Tsy maintsy ho vita ny RN 44…”
Ela ny ela, tanteraka ihany ny fanaovana godirao manontolo ny lalam-pirenena faha-44, araka ny tokin’ny filoha Rajoelina. Maro koa ny fotodrafitrasa hatao any an-toerana, ary notsoriny fa tsy maintsy handroso i Madagasikara sy Ambatondrazaka afaka dimy taona.
Napetraky ny filoha Rajoelina Andry, omaly any Ambatondrazaka, ny vato fototra, hanamboarana godirao ny lalam-pirenena RN 44, mampitohy an’i Moramanga-Ambatondrazaka. Nahitsy ny teniny, “nilaza aho nandritra ny fampielezan-kevitra hoe hatao ny RN 44, misy ireo manenjika fa tsy ho vita io. Dia hoy aho hoe, tsy maintsy ho vita ny RN 44 satria saropady ny velirano ka tsy maintsy hatao”. Hapetraka anio kosa ny vato fototra ho an’ny any Moramanga.
Mirefy 159 km ny lalana Ambatondrazaka – Moramanga. Efa misy ampahany vita godirao, ny Vohidiala-Ambatondrazaka (25 km), ny Moramanga-Marovoay (25 km) ary misy ampahany vitsy koa eny antenantenany, ao koa ny vita rarivato.
Anisan’ny hatao godirao koa ny lalana miainga eo an-tampon-tananan’Ambatondrazaka Feramanga Avaratra hatrany amin’ny seranam-piaramanidina, mirefy 5 km. Nohazavain’ny filoham-pirenena fa efa atao ny fanadihadiana iarahana amin’ny kaompania Air Madagascar, hamerenana ny zotra ana habakabaka mivantana Antananarivo-Ambatondrazaka.
Jiro, rano, tohodrano, sekoly,…
Maro koa ny fotodrafitrasa hafa haorina sy hapetraka any Ambatondrazaka. Hampiana gropy faninefany ny an’ny Jirama satria tsy ampy ny herinaratra any an-toerana. Amin’ny taona 2020, atsahatra ny fampiasana gropy mandeha amin’ny solika fa soloina toby miaraka, mandeha amin’ny masoandro sy solika.
Hanaovana lavadrano lehibe koa any an-toerana satria tsy ampy ny famatsian-drano fisotro, 3 000 m3/andro no ilain’ny mponina nefa 2 500 m3/andro sisa. An-dalam-pahavitana ny tohodrano any Bevava, hamboarina ny any Sahamaloto, ny any Manaingazipo. Notoloran’ny filoha masomboly vary 2 t ho an’ny kaoperativa, ondry 36 hompian’ny fianakaviana sahirana, milina fanjairana sy lamba. Novatsina fiara 4×4 koa ny mpitandro filaminana.
Haorina any Ambatondrazaka koa ny EPP manara-penitra, homena “tablette” ny mpianatra manala CEPE, hisy ny tranomboky, hatao synthétique ny kianja filalaovam-baolina, sns.